Chickpeas xawaash leh oo ay ku jiraan baradho iyo digir | Bezzia
Maria vazquez | 19/06/2022 10:00 | Legumbres
ka chickpeas basbaaska leh baradho iyo digirta aan maanta soo jeedinayno waxaa laga yaabaa inaysan ahayn kuwa ugu habboon in la wadaago heerkulka usbuuca hore, laakiin hadda oo ay ku soo noqdeen sidii hore waxay u muuqdaan soo jeedin weyn.
Xawaashyadu waxay siinayaan taabasho qaawan oo ku saabsan chickpeas aasaasiga ah ee aad u fudud in la diyaariyo. Paprika, dhir iyo cumin dhadhan kaliya ma siiyaan laakiin midab fiican maraqa yaanyada oo ay la socdaan. Maraqa yaanyo oo aad ku diyaarin karto yaanyo bislaaday oo yaanyo qasacadaysan leh ama xitaa yaanyo la jajabiyey.
Hadii aad sharad ku gasho digaagdu hore loo kariyey Kuma qaadan doonto in ka badan 30 daqiiqo inaad diyaariso cuntadan. Taladeenu waxa ay tahay marka aad shido in aad labanlaab u qaybiso, si aad cuntadu u hesho laba cisho oo kala duwan, oo aad ka nasato cunto karinta. ku biir iyaga a salad cagaaran waxaadna heli doontaa menu aad u dhameystiran.
3 yaanyo qasacadaysan oo diiray
1/4 basal cad
1 qaado oo ah paprika
1/2 qaado yar oo kuufun ah
2 baradho, la jarjaray
200 g. digaag la kariyey
1 koob oo digir ah
Ku rid muraayad isku dar ah yaanyada, basasha, xabo toon, saliid saytuun iyo dhir udgoon: basbaaska, paprika, turmeric iyo budada qamuuska. Ku dar milix oo garaac ilaa aad ka hesho suugo.
Kadib ku shub maraqa digsi iyo kulaylka.
Ku dar baradhada iskuna qas.
Kadibna ku shub biyaha karso baradhada inta lagu jiro 15 daqiiqo.
Kadib ku dar digir oo kari 5 daqiiqo oo kale ama ilaa baradhada iyo digir la dhammeeyo.
Dhamaad ku dar digirta la kariyey oo isku qas si aad u kariso laba daqiiqo oo kale.
Ku darso digirta xawaashka leh ee baradhada kulul iyo digir.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Legumbres » Chickpeas xawaash leh oo ay ku jiraan baradho iyo digir